टिमुर खाँदा फाइदै-फाइदा ,बचाउँछ यी ६ रोगहरुबाट ! – Sandesh Press
July 10, 2021 383
सबैलाई थाहा छ ,टिमुर विशेष गरि अचारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । टिमुरलाई दानाकै रुपमा होस् वा धुलो वनाएर प्रयोग गरिन्छ । यसको स्वाद तीतो, पिरो र जिब्रो पर्पराउने खालको हुन्छ । यसको गर्मी वा जाडोको दुवै समयमा प्रयोग गरिन्छ । त्यसैले नेपाली टिमुर पछिल्लो समय विश्व बजारमै लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।आज हामी यही टिमुरको फाइदाहरुको बारेमा कुरा गदै छौ । हेर्नुस् ,टिमुरले यस्तो रोगहरु निको पार्छ ।
१. टिमुरले हिमाली क्षेत्रमा यात्रा गर्दा लेक लागेको ठिक हुन्छ ।२. टिमुरले दाँत दुखेको निको पार्ने ,शक्ति दिने ,जरो, अजिर्ण, हैजा आदी समस्याहरुबाट मुक्ति दिन्छ ।३. टिमुर आँखा कम देख्नहरु र न्युन रक्तचाप भएका व्याक्तिलाई अचुक औषधी हुन्छ ।४. टिमुरले हात खुट्टा मर्किएको , टाउको दुखेको र पिनास पनि निको पार्छ ।५.टिमुरमा फस्पोरसको मात्रा पनि हुने भएकाले हाडको लागि फाइदाजनक हुन्छ ।६. टिमुरले क्यान्सरको सम्भावना कम गर्ने , पेटको जुका मार्ने र भोक लाग्ने समस्याबाट पनि मुक्ति दिन्छ
यो पनि पढ्नुहोस …..६७१ अरब सम्पति भएकाको एक्लो छोरा सबै कुरा त्यागी बने बौध्द भिक्षु
आनन्द सुरुबाटै पढाइमा अब्बल थिए । त्यसैले मेलबर्न युनिभर्सिटीबाट पोल्टिकल साइन्स र इकोनोमिक्समा ग्राजुएसन गर्नका लागी उसलाई स्कलरसिप मिलेको थियोे । उ यहाँ पढाइको साथसाथै छात्रका अखबारमा काम गर्थ्यो । रि’स्क लिने बानी थियोे, त्यसैले साथमा बोटिग पनि गर्थे । सदैव लो प्रोफाइलमा रहनेवाला आनन्दको बिजनेस एटंरटेनमेंट देखि लिएर आयल, पावर, सिपिग, टेलिकम्युनेसन र प्रोपटी फिल्डमा छ । स्रोत-AWAAZ INDIA TV, अनुबाद सुर्य
Prevमोडेल निशाको स्वास्थ्य अवस्था बारे जा’नकारी दिदै नर्विक हस्पिटलका डक्टर पहिलो चोटि मिडियामा,यसो भने,, (भिडियो
Nextभ्वाइसको लाइभ शोमा कोच तृष्णाले सोनामलाई प्रपोज गरेपछि (भिडियो)
पहिलो छोरा जन्माएको १५ बर्ष पछि बिपना थापाले जन्माइन छोरी